Ny Redmi Note 7 dia namidy singa maherin'ny 4 tapitrisa | Androidsis
Tamin'ny volana Janoary dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Redmi Note 7. SIo no finday voalohany an'ny marika sinoa amin'ny maha marika mahaleo tena. Smartphone iray tonga handresy ny elanelam-potoana Android. Hatrany am-piandohana dia nahavita tsara teo amin'ny tsena, nahatratra haingana ny Vola tapitrisa namidy.
Ity modely ity dia nivelatra tamin'ny tsena iraisam-pirenena. Satria efa herinandro vitsivitsy izay misy amin'ny fomba ofisialy any Espana, izay ahitana ny zava-drehetra hahombiazana amin'ny marika sinoa. Ankehitriny, Xiaomi dia manambara ny isan'ny varotra vaovao ho an'ny Redmi Note 7, izay manazava fa fahombiazana eo amin'ny tsena.
Nidina teny an-tsena ilay fitaovana nandritra ny telo volana monja. Raha ireo tarehimarika tamin'ny volana voalohany dia efa nilaza mazava fa misy ny fahalianana, ireo tarehimarika vaovao nozarain'i Xiaomi indray dia manamarina izany. Ny Redmi Note 7 dia manana efa namidy singa maherin'ny 4 tapitrisa eny an-tsena. Tao anatin'ny telo volana latsaka.
BOOM! Andro vaovao, tsangambato vaovao lehibe ho an'ny antsika # RedmiNote7 andian-dahatsoratra.
Ity misy teny 7 isaorana anao tamin'ny fanohananao rehetra…
MISAOTRA#NoMiWithout You # 48MPforEveryone pic.twitter.com/pmimoFhjKE
- Xiaomi # 48MPforEveryone (@xiaomi) Aprily 2, 2019
Tsy isalasalana fa ireo dia tarehimarika azo alaina amin'ny marika vitsy ankehitriny. Saingy manazava izy ireo fahalianana lehibe naterak'ity fitaovana ity eo amin'ny elanelam-potoana amin'ny Android. Izy io dia aseho ho safidy tena mahaliana amin'ny resaka sandan'ny vola. Ka gaga izahay fa amidy be io.
Ity karazana telefaona finday ity dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny Xiaomi. Ny Redmi Note 7 dia lasa voalohany amin'ny laharam-pahamehana natomboka tamin'ny marika vaovao. Ho fanampin'ny maha ny tokana amin'ity sehatra ity izay hatomboka amin'ny tsena iraisam-pirenena, araka ny nanamafisan'ny orinasa azy manokana.
Raha ny Redmi Note 7 dia nahatratra an'io isa io tao anatin'ny fotoana fohy, dia mampanantena izy fa tsy isalasalana fa iray amin'ireo Smartphone finday be mpividy indrindra amin'ny Android amin'ity taona ity. Satria manomboka amin'ny tsena vaovao koa izy io, izay azo antoka fa manampy amin'ny varotra tsara kokoa. Ohatra, amin'ny tranga any Espana dia maharitra roa herinandro monja. Ka hitombo tokoa ny varotrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi dia efa nivarotra Redmi Note 4 maherin'ny 7 tapitrisa